WARNING! Costly AREA CODE: 809 – message is inaccurate and misleading. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Hoax » WARNING! Costly AREA CODE: 809 – message is inaccurate and misleading.
WARNING! Costly AREA CODE: 809 – message is inaccurate and misleading.
Posted by kai on Jul 9, 2011 in Hoax |4comments
AT&T VERIFIES IT’S TRUE :http://www.att.com/gen/press-room?pid=6045
International call scams are real. However, the information about these scams in the message is inaccurate and misleading. The message substantially exaggerates the potential costs to victims. The information in the warning message was not issued by AT&T as suggested in the email.
This email forward, ostensibly from American telecommunications giant, AT&T warns that consumers are being tricked into dialling international telephone numbers and thereby incurring enormous call charges of thousands of dollars per minute.There are serious inaccuracies in the message as explained later in the article. However, international call scams are real. In the US, international telephone numbers can usually be identified by the prefix “011”. However, some non-US destinations have area codes such as 809, 284, 876 and others that can make telephone numbers look like domestic calls when they are actually international calls that incur international call charges. Scammers have capitalized on this element of confusion in order to trick people into dialling such numbers. A Federal Trade Commission (FTC) articleabout international telephone number scams notes:
A more recent notice about the scams published on the AT&T website explains:
The message was not sent by AT&T and the apparent endorsement by an AT&T Field Service Manager named “Sandi Van Handel” is entirely bogus.According to the previously mentioned “AT&T article, “the e-mail purports to originate within AT&T’s corporate offices and includes the name and partial telephone number of an imaginary employee.” It seems apparent that the bogus references to AT&T were added in an attempt to give false authority to the message. A later version of the message leaves ofF the supposed “Sandi Van Handel” endorsement but still falsely suggests that the warning was issued by AT&T.
ခုတလော ဒါမျိုးအီးမေးလ်တွေ ရလွန်းလို့.. အာရွှီးတ၀က်ပါကြောင်း သိအောင်တင်ပေးလိုက်တာပါ..။
ရီတန်းကော လုပ်တိုင်း သတိတော့ထားပေါ့နော..။
ဟဲလို.. ဦးခိုင်လား။ ကျနော် အမှန်တရားချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ရွာသားတဦးပါ။ မန်းလေးဂေဇက်အတွက် သတင်းထူး တခုပေးချင်လို့ ၈၀၉ ၁၁၁ ၁၁၁၁ ကိုပြန်ဆက်ပေးပါနော်။
တခါ လည်း ထူးဆန်း ပြီးခတ်တည်တည် ဖြီး တဲ့ telephone message ကိုနားထောင်ဖူးတယ် ။ နံမယ်တွေ၊ လိပ်စာ တွေ ,အတိအကျ ပဲ ။ တရားရုံးတက်ဖို့ ဘာဖြစ်လို့လာမတက် လည်း ပေါ့ ။ ဆင့်စာမရ ဘူး လား ပေါ့ ။ ဒီလိပ်စာကို လာပါပေါ့ ။ ကိုယ့်မှာ ဘာတရားရုံး မှတက်စရာ မရှိဘူး လို့ပြောတော့ ဒါဆိုရင် ဒီ ဖုံးကို ဆက်ပါ ပေါ့ ။ ဘာမှမလုပ်ပဲ နေလိုက်တယ် ။ အခု ထိဒီ ကိစ္စ နဲ့ပါတ်သက် ပြီး ဘာမှပြဿနာ ထပ်မဖြစ် ဖူး ။
နောက် တခုက internet တပ်ခါစ က dial-up internet နဲ့ surf လုတ် တာ scam web-siteနဲ့မိပြီး ဘာမှန်းမသိတဲ့ ကျွန်းတိုင်းပြည် ကို overseas call ခေါ်တယ်ဆိုပြီး telephone bill ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ငါးထောင်ကျ သွားတယ် ။ telephone bill ကို bank account ကနေဖြတ်တာလုပ် ထားတော့ ပိုက်ဆံ ဖြတ် ပြီးမှ သိတယ် လေ ။ complain တက်ပေ မဲ့မရတော့ဘူး ။ ဒါနဲ့ ADSL ပြောင်းတပ်ပြီး bill ကိုလည်း bank account က ဒါရိုက်ဖြတ်တာ ကို cancel လုပ် လိုက်တယ် ။ တခြား လိမ်နည်း ပေါင်းစုံရှိသေးတယ် ။ စာတအုပ် ရေးလို့ရတယ် ။ ATM တို့ credit card တို့နဲ့လည်း လိမ်ကြ တာ ။လုပ်စားကြတာတွေ ။
ဒါကြောင့်dial-up နဲ့ internet တက်ကြတာကို သတိ ပေးချင်ပါတယ် ။connection လည်းမကောင်းပါ ။
ဘုမသိ ဘမသိ ဖုံးတွေ လဲ return-call စရာမလိုဘူး ။ အနည်ဆုံးက တော့ promotion sales နဲ့ insurance sales ရောင်းတာ တွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ် ။
သိချင်ရင် သူပေးတဲ့ ဖုံးနံပါတ်ကိုပြန် မဆက်ရဘူး ။ တရားဝင် telephone directory နံပါတ် နဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုစုံစမ်း ကြဖို့ အစိုးရကနှိုးဆော်တယ် ။ အရေးယူနိုင်တဲ့ complain လုပ်လို့ရတဲ့ toll-free နံပါတ်လည်းရှိ တယ် ။
ဒီမှာလဲပဲ – ကိုကိုင်ထားတဲ့ phone no. နဲ့ ပြန်ခေါ်တာတော့ကြုံ ဖူးသား ။မတူတဲ့ ဖုန်း(၂) လုံးမှာ နာမည်ရယ် network name ရယ် နဲ့ ဖုန်းတွေထဲမှာမှတ် ထားတာ။ အိမ်ကိုပဲသတ်သတ်ခေါ်တဲ့တလုံးကို incoming ၀ငိလာတာ က ကိုနာမည် ။ network name နဲ့ မေလတုန်းက ၀င်လာလို့ လန့်ပြီးကိုင်လိုက်တော့ ကောင်မလေးသံနဲ့ ကို English လို ပြောတော့သူကနားမလည် ။( မြန်မာလိုပ)ဲ inactive လ်ုင်းမို့ ထပ်ထပ်ရောင်းတာလားတော့မသိဘူး ။ special promotion ဆိုလဲလိမ်တာများတယ်